Sida loo xiro codsiyada ku jira Android | Androidsis
Sida loo xiro barnaamijyada ku saabsan Android
Dhammaan nidaamyada hawlgalka, haddii ay yihiin taleefannada gacanta, TV-yada casriga ah ama kombuyuutarrada, waxay si toos ah u maareeyaan hawlgalka iyo isticmaalka xusuusta qalabka. Sidan oo kale, xusuus dheeraad ah ayaa loo baahan yahay, codsiyada aan furanay muddo dheer ayaa xirmaya, iyadoo lagu haayo asalka, kuwa waxaan dhawaan furay.
Si kastaba ha noqotee, munaasabadaha qaarkood, taleefannada casriga ah ayaa noo baahan aan riixno si dhakhso ah loo socodsiinayo codsiyada iyo / ama dheecaan badan. Xaaladahaas oo kale, waa marka nalagu qasbi karo inaan codsiyada ku xirno gacanteenna aaladda, geedi socod aad uga fudud sida ay u muuqato marka hore.
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan si cad u qeexno waa xusuusta qalabka gabi ahaanba wax shaqo ah kuma laha qadarka keydinta. Sidan oo kale, haddii aan ka tirtirno codsiyada aaladdayada, ma heli doonno xusuus dheeraad ah, sida haddii aan xirno codsiyada socda, ma heli doonno meel badan oo wax lagu keydiyo.
Xir barnaamijyada ku saabsan Android
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno si aan u xirno codsiyada ku jira Android waa gala shaqo badan halkaas oo thumbnail oo ah dhammaan codsiyada ka furan nidaamka lagu muujiyo.
Telefoonada casriga ah oo leh noocyo casri ah oo casri ah oo Android ah oo qaatay dhaqdhaqaaqyo, si loo helo waxqabadyo badan waa inaan qabannaa mari shaashadda hoosteeda.
Haddii ay tahay moobayl duug ah, waa inaan gujinnaa badhanka taabashada oo matalaya laba labajibaarane, mid ayaa dulsaaray midka kale.
Si loo xiro arjiga ama codsiyada, waa inaan xirnaa mari barnaamijka kor moodooyinka ugu casrisan. Haddii taleefannadeenna casriga ahi da 'weyn tahay, waa inaan guji X lagu muujiyey magaca arjiga agtiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo xiro barnaamijyada ku saabsan Android
Sida loo otomatiya gariirka, dhawaqa oo aan loo carqaladeynin qaabka ku jira Android 11
Xadka Xperia Compact wuxuu ku soo laaban doonaa suuqa 2021